Global Voices teny Malagasy » Mizara Turrón de Doña Pepa Ao Colombo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Janoary 2018 8:33 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Turrón de doña Pepa. Sary avy amin'ilay mpisera Alejandro Matos  (CC BY-NC-ND 2.0).
Ny harivan'ny Alarobia 29 Novambra, maro tamintsika GV no tao amin'ny hotely Mount Lavinia, raha nifanaraka hisakafo hariva tao amin'ny trano fisakafoanana akaikin'ny hotely isika. Vonona handeha aho, na dia reraka aza ary mbola mitolona amin'ny fiovana ora [na mivadika andro sy alina].
Roa andro talohan'io, tonga tany Colombo aho rehefa avy nandeha 36 ora avy any Lima, tanànako Peroviana. Tena dia ela be tokoa izany, ny ampahany lava indrindra tamin'izany dia ny sidina 15 ora avy ao Sao Paulo mankany Dubai. Fihetseham-po maro no nifangaro tato amiko, fihetseham-po izay nihanitombo hatrany hatrany rehefa nihananakaiky ny andro niaingàna. Nisy ny fientanam-po sy fifaliana izay nanatsara ny fanahiko, ary koa fitiavana te hamantatra ny faharetana mandritra ny sidina maharitra 15 ora.
Vonona hatrany hizara ny tsara avy amin'ny fireneko miaraka amin'ireo mpikambana namako ao amin'ny GV, nitondra voankazo Peroviana aho. Nitondra mazamorra morada  sy chicha morada  ho an'ilay olona tsy fantatro homena fanomezana sy ho an'ireo namana sasany aho. Nitondra turrón de doña Pepa  ihany koa aho mba hizara ho an'ireo mpikambana GV maro araka izay azo natao.
Tamin'ny fomba nentim-paharazana, tsy hita afa-tsy amin'ny volana Oktobra ny turrón de doña Pepa, volana iray mifandraika amin'ny Tompon'ny Fahagagana  [mg] sy ny Foibe Manan-tantara Lima. Ankehitriny anefa, afaka mahita turrón mandritra ny taona ianao ary tsy mila miandry volana iray manokana vao afaka mividy izany.
Anaty fonosana iray ny turrón, fonosana milanja 250 grama izay tsy maintsy tetehina vao hohanina. Ka nitondra turrón tamin'ny fonosany orizinaly aho ary nankany amin'ny trano fisakafoanana iray mba hangataka antsy. Nijery ahy tamin'ny fomba hafahafa ilay mpitantana ny trano fisakafoanana … saingy nanjary nazava taminy ny zava-drehetra raha vao nampiseho azy ny turrón aho ary nampahafantatra azy ny tiako ho atao.
Ilay mpitantana mihitsy no nitady antsy ary nanapaka ny turrón tamin'ny tetika sahaza. Satria izy no nitetika ilay zavatra, nanazava azy momba ny turròn aho ary nisisika aho mba hanandrana izany izy.
Niaraka tamin'ny turrón napetraka tamin'ny lovia anankiroa, nandeha tao amin'ny Efitra Malalaka Fandraisana aho ary nanomboka nanolotra izany ho an'ireo mpikambana GV izay teo. Liana te hahafantatra momba ny turròn ny rehetra, saingy lazaiko hoy aho rehefa avy manandrana izany, faly kokoa tamin'ny tsirony mihoatra noho ny hafa ny sasany.
Mpikambana telo tao amin'ny GV no nanontany ahy hoe nahoana aho no tsy nitondra cebiche . Cebiche dia nahandro Peroviana malaza. Izahay Peroviana dia mirehareha am-pahasahiana amin'ny nahandronay, ka nahatonga ahy nitsiky ny reharehako amin'ny firenena, “Tsy misy cebiche tamin'ity indray mitoraka ity, ry zalahy. Fa turrón aloha andramana”.
Taorian'ny 15 minitra, tapitra ny turrón. Sombiny kely sisa tavela teo amin'ny lovia. Indrisy anefa, tsy naka sary ny fotoana mihitsy aho, rarintsaina noho ny fiovan'ora no nahatonga izany!
Tao anatin'ny fihomehezana sy ny fanazavana momba ny zavatra natolotro, nanana fahatsapana mahatalanjona aho fa nizara kely ny fireneko tamin'ny olona avy amin'ny saika manerana izao tontolo izao. Ary iray amin'ireo zavatra izay mahavariana ahy mikasika ity fiarahamonina mahafinaritra ity izany; tena mitondra tombontsoa ny fiarahana, ny kely indrindra amin'ny zoron'ny fireneko miaraka amin'ny olona, izay sady, mizara ny kely indrindra amin'ny zoron'ny firenen'izy ireo amiko, amin'ny fomba fianatra tsy misy fiafarana.
Tena Global Voices tokoa isika!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/06/112579/
 Tompon'ny Fahagagana: https://mg.globalvoices.org/2012/10/26/39417/